Archive du 20170530
Voahangy Rajaonarimampianina Tsy mahatoky ny vadiny ?
Miverina miditra lalina amin�ny politika sy ny fiainam-pirenena indray i Voahangy Rajaonarimampianina amin�izao fotoana raha tsy dia re sy tsy henoheno teo aloha teo.
Samy be tsaho !
Dia mihomehy irery mihitsy aho ry Jean mandinika anao miala bala sy mamafa ny zavatra nambaranao taloha. Ilay resaka telo volana indray no horesahiko eto ry Jea fa sao ianao gaga a !
Sendikan�ny mpiasan�ny fadin-tseranana Mitaky tombontsoa ihany koa
Nanomboka nitokona tetsy Antaninarenina koa ry zareo avy eo anivon�ny mpiasan�ny fadin-tseranana omaly.
Raharaha Antsakabary Voaporofo ny habibiana nataon�ireo polisy�
Manao antso avo sy manontany ny fivoaran�ny fanadihadiana izay nataon�ny fitondram-panjakana tao anatin�ny 3 volana momba ny �raharaha Antsakabary� ny Vovonana Mampiray tarihin�i Arlette Ramaroson, ka nandefa taratasy any amin�ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra ary ireo sampan-draharaham-panjakana voakasika.
Mpiraki-draharahan�ny fitsarana Manomboka mihetsika indray
Tafahoatra ny fanaovana tsinontsinona ny mpiraki-draharaha eto amintsika, raha ny fanambarana nataon-dry zareo eo anivon�ny fivondronan�ny mpiraki-draharaha tetsy amin�ny hotely Colbert Antaninarenina omaly.
Mpiompy omby eny Ankatso Ambolokandrina Nahazo rariny tamin�ny CUA
Tsy alana amin�ny toerany araka ny fampitahorana efa nahazo azy ireo hatramin�ny ela fa afaka manohy ny asa fiompiany ireo mpiompy omby ao amin�ny fokontany Ankatso Ambolokandrina.
Soaniedanana PK 67 Hosokafana ny 3 jona ho avy izao ny tsena vaovao
Mitohy hatrany ny fandraisan�ny fikambanana HAFARI Malagasy an-tanana ilay tetikasa fifindra-monina ao Soaniedanana Ankazobe PK 67 amin�izao fotoana na dia mbola mamita sazy any am-ponja aza ny filoha nasionaliny Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Fitantanana ny kianjaben�i Mahamasina Misy manohitra ny toromarik�i Lalao Ravalomanana
Noho ny fangatahan�ireo olona maro mampiasa ny kianjaben�i Mahamasina hikotranana isa-maraina dia namoaka didy tsy ela akory izay ny Ben�ny tan�nan�Antananarivo Renivohitra fa misokatra ho an�ny rehetra amin�ny 5 ora maraina ny kianja ary mihidy kosa rehefa amin�ny 7 ora hariva.
Mahalasa saina sy mampametra-panontaniana ihany hoe ndrao dia tokony hasiana alimanaka amin�izay ity fitokonana miverimberina sy vahaolana famonoana afo lava niseho tao anatin�ny 4 taona sy 5 volana teto amin�ny firenena ity ?
Masoivohon�ny CNaPS Nisokatra ny any Nosy Be Hell Ville
Niampy iray ny rantsan�ny CNaPS any Nosy Be satria ankoatra ny masoivoho any Dzamanjary dia nisokatra ny faran�ny herinandro teo ny ao Hell Ville. Tafiditra amin�ny politika fanakaikezana ny vahoaka ataon�ny CNaPS ny nanokafana ny any amin�ny fokontany Camp Vert Hell Ville, 14km miala ny eo Djamanjary,
Fampianarana ambony Mitohy ny fitakian�ny SECES
Tsy mbola nisy ny fifanarahana niraisana nivoaka tamin�ny fifampidinihan�ny SECES sy ny tompon�andraiki-panjakana, araka ny fanazavan�ny filohan�ny SECES nasionaly Dr Dimby Andrianina Ralambomanana.
�Gym Bac� teny Mahamasina Tovovavy mpiadina iray no bevohoka
Nanomboka omaly alatsinainy 29 mey tetsy amin�ny kianjaben�i Mahamasina ny adina ara-panatanjahantena Bakal�rea ho an�ireo sokajy A2 avy eo amin�ny foibem-panadinana lisea Andohalo sy Nanisana samy ao anatin�ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Ahiahy momba ny fandaharam-pianarana vaovao Misy sekoly efa mitady vahaolana
Anisan�ny miteraka resabe eny anivon�ny fiarahamonina amin�izao fotoana izao ny fanovana ny fandaharam-pianarana hotontosain�ny minisiteran�ny fanabeazam-pirenena.
Mirongatra ny halatra lavanila any amin�ny kaominina ambanivohitra Manamivalana, distrikan�i Fenoarivo Atsinanana.